Muqdisho: Qodob ka mid ah Heshiiskii Garoowe oo Baarlamaanka Soomaaliya kasoo horjeesteen
Baarlamaanka Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo Muqdisho uu uga socdo kalfadhigoodii ugu dambeeyay kaas oo lagu ansixinayo hanaanka doorasho ayaa shalay dood xasaasi ah ka yeeshay hanaanka doorasho oo ay ku heshiiyeen dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamul Goboleeyada dalka.
Xildhibaanada qaarkood ayaa kasoo horjeestay burburinta gudigii doorashada ee hore kaas oo lagu burburiyay heshiis Garoowe ay kuwada gaareen Puntland iyo Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xildhibaan Yuusuf Maxamed Cali ayaa sheegay in heshiiskii Muqdisho lagu gaaray uu yahay mid xaaraan ah oo aan waafaqsanayan dastuurka dalka.
‘’Waxa la gaaray waa xaaraan, waana in dib loogu noqdaa hadii cid lagu dilayo aniga halaygu dilo, sideen ku yeelnaa in gudigii doorasho ee aan halkaan ku samaynayo mid kale lagu dul sameeyo, waxa meeshaan ku yaala waa sharci daro waana xaaraan’’ Ayuu Yiri Xildhibaan Yuusuf Maxamed Cali.
Xildhibaan Sayid Cali oo isna ka irsan Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa codsaday in lasoo cadeeyo qodobada meeshaan ku qoran, isagoona isna sheegay in Xukuumaddu aysan waxba faah-faahin ah u hayn heshiiska nooca doorasho ee la horkeenay Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sii wadi doona doodooda Arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana la ogayn halka ay ku dhamaan doonto dooda socota.
Maamul Goboleedyada Soomaaliya iyo Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa heshiiska ay ka gaareen hanaanka doorasho, waxaa xildhibaanada qaybtood ay u arkeen in loo yeeriyay.